Fanaterana voninkazo ho an'ireo fikambanana ara-dalàna amin'ny alàlan'ny famindrana banky any Moskoa | Ny fandoavam-bola avy amin'ny kaonty fandaminana an'ny fikambanana
Fanaterana voninkazo ho an'ireo fikambanana ara-dalàna amin'ny alàlan'ny famindrana banky any Moskoa.
Te-hanafatra voninkazo ho fikambanana ara-dalàna. olona manana karama avy amin'ny kaonty any Moskoa?
Mora ny manafatra amin'ny alàlan'ny famindrana banky!
Te-hanafatra voninkazo dieny izao ve ianao? - misafidy fehezam-boninkazo fotsiny Floristum.ru any Moskoa, ary amin'ny pejin'ny kaomandy, safidio ny fomba fandoavam-bola "Tsy vola ho an'ireo fikambanana ara-dalàna", fenoy ny antsipiriany ary halefa avy hatrany ny fifanarahana amin'ny mailakao ary hisy faktiora.
Tianao ve ny mamarana ny fifanarahana mialoha ary manafatra voninkazo amin'ny fotoana mialoha? - azafady manorata aminay momba ny fikasanao: corporate.floristum.ru/en na miantso: 8 800 600-54-97.
Ny karazana fehezam-boninkazo amin'ny vidiny aseho eo amin'ilay tranonkala dia atolotra ho an'ny besinimaro tolotra varotra ho an'ny voninkazo ho an'ny fikambanana ara-dalàna.
Tombontsoa azo amin'ny fiaraha-miasa Floristum.ru any Moskoa ho an'ny fikambanana ara-dalàna
(tolotra varotra ho an'ny voninkazo misy fanaterana):
Ny fehezam-boninkazo dia nanaterana isan'andro tao Moskoa sy ny tanàna rehetra any Russia tamin'ny fifanarahana tokana.
Rehefa vita ny fifanarahana iray dia azonao atao ny manafatra voninkazo sy fanomezana any amin'ny tanàna rehetra any Russia izay iasan'ny Floristum.ru, ary toeram-ponenana an-jatony itoeran'ireo mpanjifanao sy mpiara-miasa aminao izany!
Fandoavana voninkazo avy amin'ny kaontin'ny banky an'ny fikambanana.
Rafitra faktiora mandeha ho azy tsotra avy amin'ny LLC "FLN" (Floristum.ru) mankamin'ny antsipirian'ny fikambanana ara-dalàna anao, amin'ny alàlan'ny endrika fanafarana fehezam-boninkazo. Tsy mila manoratra na aiza na aiza ianao, miantso ary mamela ny volavolan-dalàna, hamoaka faktiora amin'ny adiresy mailaka nolazainao ny rafitra.
Bouquets an'arivony azo alaina ho an'ny Floristum.ru any Mosko!
Alefaso ny fandefasana entana avy amin'ny tanàna any amin'ny tanàna any Russia! Ny hany ilainao dia ny mamaritra ny tanàna, misafidy fehezam-boninkazo mety ary manondro ireo masontsivana ho an'ny fandefasana.
Floristum.ru dia loharano iray izay anoloran'ireo magazay voninkazo sy orinasa ambongadiny ny fehezam-boninkafon'izy ireo sy ny forongon'izy ireo. Rehefa miantsena eto ianao dia azonao antoka fa hahazo fehezam-boninkazo tsara avy amin'ireo matihanina amin'ny vidiny manintona ianao.
Fifanarahana iray amin'ny fanafarana fivarotana voninkazo an'arivony.
Amin'ny famaranana ny fifanarahana iray dia azonao atao ny mividy voninkazo amin'ny toeram-pivoahana dimy arivo. Ny vavahady dia manana safidin'ny fehezam-boninkazo be dia be ho an'ny tsiro tsirairay. Alao an-tsaina - mihoatra ny iray hetsy. Ary azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny tsindry roa. Mila mampiditra ny antsipirihanao amin'ny endrika mety indray mandeha fotsiny ianao, amin'ny ho avy dia ampidirina ho azy ireo amin'ny forme de order.
Fiarovana amin'ny mpisoloky sy serivisy tsy dia misy kalitao.
Rehefa manafatra sy mandoa serivisy amin'ny alàlan'ny Internet dia tsy sarotra ny mianjera amin'ny fitaky ny mpisoloky ary mandany ny volanao, na mividy serivisy tsy dia misy kalitao. Ny vavahady Floristum.ru dia manana rafitra fiarovana ny mpanjifa. Mandra-pahatanteraky ny kaomandinao dia tsy hahazo vola amin'izany ny florist. Izany dia miantoka ny kalitaon'ny asa vita, ny fiarovana ny toerana honenana ary ny antoka 100% amin'ny famerenam-bola amin'ny mpanjifa.
Antontan-taratasy famaranana tsy misy korontana.
Tombony iray hafa dia ireo antontan-taratasy izay manidy ny fifanarahana dia alefa any amin'ny mpitan-kaonty anao tsy misy fampahatsiahivana. Aza adino ny manangona rosia, scan, mividy tatitra. Ankehitriny, vao mahazo orizinaly amin'ny adiresy mailakao ianao ary manitsy ny mailakao. Tsotra ary tena mety!
Tsy manana fiampangana fanampiny izahay rehefa mandoa kaonty ankehitriny.
Ny vidin'ny voninkazo dia mitovy amin'ny an'ny tsirairay. olona:
Fehezam-boninkazo mono mahazatra
Asehoy ny fehezam-boninkazo mono mahazatra rehetra
Voninkazo anaty boaty
Asehoy ao anaty boaty ny voninkazo rehetra
4850 Kitapo misy tulip misy loko maroloko "Spring Kaleidoscope"
Asehoy ny harona voninkazo rehetra
Harona sy fitambarana voankazo
Boaty miendrika fo vita amin'ny voaroy: frezy 500 gr., Raspberry 125 gr., Blackberry 125 gr., Blueberry 125 gr., Currants 125 gr.
Harom-boankazo: watermelon Thai 1, pomelo mpanjaka 1, pitahaya fotsy 1, pitahaya mavo 2, sokay kaffir 1, voanio kelikely 1, karazana manga 4 samy hafa, carambola 4, mananasy mini 1, zezika 1, longan 1, voankazo mahaliana , kiwi premium gold 3, mangosteen 3, papaya 4, rambutan 1, grandilla 10, voanio 3 mahazatra, fonosana physalis 1, ary koa miaraka amin'ireo orkide Vanda 1 hafahafa, orkide cymbidium 3, orkide dendrobium 4.
39750 Kitapo misy voankazo sy orkide hafahafa "Paradise Phuket"
Strawberry 1250 gr., Blueberry 500 gr., Blackberry 500 gr., Currant 250 gr., Raspberry 375 gr., Peony 6 pcs., Chamomile 9 pcs., Pistachio, ribbons, harona.
19750 Harona misy voaroy sy voninkazo "Amin'ny foko rehetra!"
avokado 7, kiwi 2, rose 7, chrysanthemum 3, lagurus 1 fambolena, voatabia serizy 15, kininina 1 fonosana, pistachio 3, boaty 1
8250 Composition "Avocado"
Asehoy ny harona sy ny tononkira rehetra
Mamy sy confectionery
Fehezam-boninkazo voankazo maina.
4350 Fehezam-boninkazo laharana 4
Fehezam-boninkazo mahafinaritra an'ny lehilahy.
4050 Fehezam-boninkazo laharana 6
Frezy rakotra sôkôla
4050 Fehezam-boninkazo laharana 24
Fehezam-boankazo maina maina!
3750 Fehezam-boninkazo laharana 41
4050 Fehezam-boninkazo laharana 42
"My gourmet" akora: mananasy, voanjo, voankazo maina, voanjo, manga
3150 Fehezam-boninkazo laharana 61
Ny filan'ny lahy
5250 Fehezam-boninkazo laharana 69
Asehoy ny zava-mamy sy ny mofomamy rehetra
Fehezam-boninkazo tulips kanto, volomparasy.
3645 Fehezam-boninkazo 21 tulips
Anisan'ireo karazam-boninkazo vaovao ny raozy ary mijanona ho malalany sy irina indrindra. Tsy misy karazany sy karazan-karazany hafa afaka mifanaraka amin'izy ireo amin'ny loko isan-karazany, habe, endrika ary koa ny hanitra. Ny fehezam-boninkazo misy raozy no forona malaza indrindra, satria mety amin'ny tranga rehetra ary ankafizin'ny olona tsy ankanavaka. Ny fehezam-boninkazo raozy dia nentim-paharazana ary miaraka amin'izay koa miovaova isan-karazany ka isaky ny kinova vaovao dia toa vaovao sy tsy mahazatra izy ireo. Ho an'ity, ny raozy dia antsoina hoe mpanjakavavin'ny voninkazo - tsy mitovy foana, tsy ampoizina, mistery. Misafidy fehezam-boninkazo raozy, miorina amin'ny fahatsapanao manokana sy ny fiheverana fa mipoitra ao aminao ilay fitambarana. Ity fehezam-boninkazo ity dia voaangona amin'ny karazana raozy isan-karazany.
15790 Fehezam-boninkazo 101 raozy afangaro
6696 Нежнейшая шляпная коробка.
Gerbera - 15 pc.
Pistachio - 5 pc.
5590 Fehezam-boninkazo laharana 119
Нежный букет для самых нежных чувств.
3790 Букет "Сливочное мороженое"
Sampana cymbidium orkide mavo ao anaty boaty fanomezana.
3750 Fehezam-boninkazo orkide "Aurora"
Carnation Bush - 2 pcs.
Peony rose - 3 pc.
Bush nitsangana - 8 pc.
5291 Букет из роз "Страсть"
Jereo ny fehezam-boninkazo rehetra misy vidiny ambany